သူခိုးများကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ဗီဒီယို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သူခိုးများကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ဗီဒီယို
သူခိုးများကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ဗီဒီယို
ကျွန်တော် တင်ပြမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ နယ်မြို ့တစ်မြို ့ရှိ မြန်မာဗီဒီယို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ သွားရောက်ခဲ့ရာမှ ကြားသိခဲ့ရသော အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ချင်း
လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာဗီဒီယို ဖြန် ့ချိ၊ငှားရမ်းသည် ့လုပ်ငန်းသည် ဟိုး အရင်နှစ်များစွာကတည်းက လုပ်
ကိုင်ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နေခဲ့သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု ကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ ရသည် မှာ ၎င်းမြို ့တွင်
သာမက အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ နယ်ကိုယ်စားလှယ် မူပိုင်ရှင်များ သည် ရန်ကုန် လမ်းဘေးတွင် စည်းကမ်းမဲ့
ရောင်းချနေသောကြောင့် လူတိုင်း လူတိုင်း အလွယ်တကူ ၂၀ဝ ၊၃၀ဝ ၊၅၀ဝ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနေသော
မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားများခွေများကြောင့် ဒုက္ခ အကြီးအကျယ်ရောက်နေရပါသည်။၎င်းခွေ များအား မသမာ
သူများမှ ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာဖြင့် နေရာအတည်တကျ မရှိဘဲ တစ်အိမ်တက်ဆင်း ငှားရမ်းခြင်း၊ရောင်း
ချခြင်း များ အား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဖွယ် တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် တရားဝင်ဗီဒီယို လုပ်ငန်း
လိုင်စင်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေသူများ မှာ လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းရတော့ မည် ့အခြေအနေ ဖြင့်ရင်ဆိုင်
နေရပါသည်။ ဖမ်းဆီး အရေးယူ ဆောင်ရွက် ဖို ့ရာတွင်လည်း အခက်အခဲ များစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားကြည် ့ရှုသော ပရိသတ်များ မှာလည်း အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ ကြည် ့ရှု နိုင်သောကြောင့်
သူငယ်ချင်း တို ့ကဲ့ သို့တရားဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူများ အား “ လူပေါ” ဟုပင်အပြောခံရကြောင်း သူငယ်
ချင်း၏ ပြောပြ ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ထို ကဲ့ သို ့စည်းကမ်းမြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကား အမြို့မြို့အနယ်နယ်သို ့
စီးဆင်းမှု များ လာသောကြောင့် မြန်မာဗီဒီယို လောက နေဝင်ချိန် နီးနေပြီလား ဟု စိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ရေ ရွတ်ရင်း
မြို ့တိုင်း ၊နယ်တိုင်း ဗီဒီယိုလောက မှာ ဒီပြသနာတွေပဲ ကြားကြားနေရပါတယ်။ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူလိုက်ရင်တော့ အေးချမ်းသွားမှာပါ။
တကယ်ပြောရယင်ဒီလုပ်ငန်းကခေတ်ကုန်သွားပါပြီ လုပ်ငန်းပြောင်းသင့်ပါတယ် ..မြန်မာကား နိုင်ငံခြားကားတော်တော်များများအင်တာနက်ထဲမှာ free ကြည့်လို့ရနေပါပြီ သီချင်းတွေလဲအတူတူဘဲ …….
အင်တာနက်မှာ ကြည့်လို့ရလို့ ဆိုပေမယ့် ဒီမှာက လူတိုင်းက အင်တာနက်မသုံးနိုင်သေးဘူး
အခြေခံလူတန်းစားတွေလည်း အင်တာနက်သုံးဖို့ မလွယ်သေးဘူး
သုံးနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီကအင်တာနက်အမြန်နှုန်းနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ မလွယ်ပါဘူး
အခွေဝယ်လိုက်တာမှ အကုန်အကျပိုသက်သာနေတော့လည်း အပင်ပန်းမခံကြတော့ဘူးပေါ့
အော် ကိုရင်မောင်ရယ် မြန်မာမင်းသား မင်းသမီးတွေကြားရင်တော့ ငိုကုန်ကြတော့မှာပဲ။မြန်မာပြည်မှာ ဗီဒီယို ပဲ ရိုက်နေရတာကို။
ဒါကတော့ သူတို့လည်း ကြပ်မတ်နေတာပဲလေ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခုက အခွေကလည်း ဈေးပေါမှသာ ကြည့်ကြမယ့် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်လည်း ဇာတ်ကားကလည်း ကောင်းဦးမှဆိုသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်း ရယ်ရ ပြီးရော ပျက်ချင်ရာ ပျက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကလည်း ပိုများလာပြီလေ။ ဒီတော့ ကူးခွေတွေကိုလည်း အပြစ်မဆိုသာသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းနဲ့ ကူးခွေမထွက်အောင် တစ်ခါထဲ အဲဒီးဒင်း လုပ်ရင်ကော မရနိုင်ဘူးလား။ သူတို့လည်း မထွက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားထုတ်ဝေသင့်ပါတယ်လေ…
ဥပဒေတွေရဲ ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်လည်းပါပေသည်။ ဒီလိုအခွေမျိုးတွေကို ဗွီဒီယိုလောကတွင် black အခွေများဟုခေါ်သည်။ ဥပဒေအရ၎င်းတို ့ကိုလက်ဝယ်တွေ ့ရှိလျှင် ဘာမှမလုပ်နိုင်၊သိမ်းယုံသာသိမ်းသွားနိုင်သည်။ ဖြန် ့ချီ၊ငှားရမ်း၊ရောင်းချသည်ကိုတွေ ့ရှိမှသာအရေးယူနိုင်သည်။အဲဒါကိုနားလည်သဘောပေါက်သည့်သူတွေက ဥပဒေကိုလက်တလုံးခြားလုပ်သွားကြသည်။ပြီးတော့ကာ နယ်မြို ့တွေမှာဖြစ်နေတာက ထွက်ရှိသည့်ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားများကို တစ်မြို ့စာ မူပိုင်ဈေးပေးပြီးဝယ်ကြရသည်။ပြီးတော့မှ အငှားဆိုင်တွေကို ပြန်ရောင်းချသည်။ အဲဒီမှာပြသနာစတော့သည်။မူပိုင်ဝယ်ထားသူတွေက ဇာတ်ကားကိုအငှားဆိုင်တွေကိုပြန်မရောင်းမှီ သူတို ့ဆိုင်တွေမှာအရင်ငှားကြသည။်
ငှားလို ့ဝမှအငှားဆိုင်တွေကို (RC) ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီး (register charge) (မှတ်ပုံတင်ကြေးဟုခေါ်သည်)
ပြန်ရောင်းသည်။ မူပိုင်သမားတွေ ငှားနေသည့်အတောအတွင်း အငှားဆိုင်များကလက်ပိုက်ကြည့်နေရသည်။မူပိုင်သမားများ ငှားနေသည့်ဇာတ်ကားကို ခိုးကူးသမားများက ရရှိအောင်ကြိုးစားပြီး ခိုးကူးကာ အောက်ဈေးဖြင့် တဆင့်ပြန်ငှားကြသည်။ ၎င်းဇာတ်ကားများသည် အငှားဆိုင်များလက်ထဲသို့တရားဝင်မရောက်ခင် ခိုးကူးသမားများကကြားဖြတ်ငှားသည့်အတွက် အငှားဆိုင်များဘယ်လောက် နစ်နာမလဲ စဉ်းစားစရာမလို။ မူပိုင်လိုဆိုင်တွေက ဇာတ်ကားကိုကြိုငှားလိုက်သည့်အတွက် သူခိုးများလက်မထောင်နေသည်မှာ နယ်မြို ့ကြီးများတွင်ဖြစ်နေသည့် အဓိကပြသနာတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း နယ်မြို ့မှာ ဖြန် ့ချိတဲ့ ပုံ စံ ကတော့ တစ်မြို ့နယ်လုံး ကို တပြိုင်နက်
တည်း ဖြန် ့ချိတဲ့ ပုံစံနဲ ့ဖြန် ့ချိတာပါ။ပုံမှန်အားဖြင့် နယ်တွေအကုန်လုံး ဖြန် ့ချိပြီးမှ ရန်ကုန်မြို့မှာ ထွက်ရှိတာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ တိုင်း ( သို ့)ပြည်နယ် မူပိုင်ယူထားသော
ဖြန့်ချိရေးသမား များ၏ နောက်ကျခြင်း နှင့် အခြားသော အကြောင်းကြောင်းများကြောင့်
ရန်ကုန် ထွက်ရှိပြီးမှ ထွက်ရှိ ပါက ထိုကဲ့သို ့မသမာသူများ အတွက် အကွက်ကောင်းဖြစ်နေခြင်းကို ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပြုလုပ်မှသာလျှင် ဗီဒီယိုလောက တစ်ခုလုံး ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
အခြားသော နယ်မြို ့များတွင် မသိပါ ၊သူငယ်ချင်း၏ မြို ့မှာတော့ အစိုးရဝန်ထမ်းများပါ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည် ဟု ကြားသိရပါသည်။ဖမ်းဆီးအရေးယူ ရန်အကောင်အထည် ဖော်လျှင် လည်း သတင်းပေါက်ကြားခြင်း ပြသနာများကြောင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ ဟု စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိရပါသည်။
တရုပ်နိင်ငံက စက်ရုံတွေကပစ္စည်းထုတ် တဲ.အခါ
အနောက်သူဠေးနိင်ငံတွေအတွက် ဈေးကြီးကြီးနဲ. ကောင်းကောင်းတမျိုး
အဲဒီပစ္စည်းမျိုးကိုဘဲ ကွာလတီ ရှော.ပြီးအရှေ.နိင်ငံကလူတွေ ဝယ်နိင်အောင်
ဈေးပေါပေါ နဲ.တမျိုး အမျိုးမျိုးထုတ်ကြသတဲ.
အခွေတွေ ခိုးကူးထွက်နေတာ မြတ်လို.လုပ်ကြတာပါ
အဲဒီတော.ခွေထုတ်တဲ.လူတွေလဲ ဈေးအမျိုးမျိုး နဲ.ထုတ်ကြည်.ပါလား
ရုပ်ရှင်သမားတွေတော့ သိပ်မလွယ်ဘူး ထင်တယ်။
ခိုးကူးခွေတွေလို.. လမ်းဘေး မှာ တွင်တွင် ရောင်းနိုင်မယ် ဆိုရင် နေရာ ပြန်ရ လာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ အစစ်က ဆိုင်မှာ မြိန့်မြိန့်ကြီး နေတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ မျက်စိရှေ့ မြင်လို့ ဝယ်တတ်တဲ့ လူတွေ များတော့ ဆိုင်ပေါ်က ဟာ သီးသန့် လူတွေ လက်ထဲ မရောက်တော့ ပြန်ဘူး.. အဲလိုလေးလဲ တွေးမိတယ်။
ခုရန်ကုန်က နယ်တွေကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အခွေတွေက ခိုးကူးခွေ က နည်းပါတယ် ။ ရန်ကုန်ဆိုင်များမှ ငှားလို ့ဝသွားလို့လမ်းဘေးဆိုင်တွေကို ရောက်သွားတဲ့ တရားဝင် ဆင်ဆာ
တံဆိပ် တွေ ပါတဲ့ မာစတာခွေတွေပါ ။မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားခွေတွေကို ဆိုင်တင်ရောင်းချခွင့်မပြုပါဘူး။
ခိုးကူး သမား ၊ ကူးခွေ အရောင်းသမား ဆိုတာလည်း
123 နှင့် အတူတူ ပဲလို ့ထင်မိပါကြောင်း
123 နှင့် အတူတူ ပဲလို ့ထင်မိပါကြောင်း……) ဆိုလို့ 123 ကလည်း ပြန်ပြီးခေါင်းထောင်နေပြန်ပါပေါ့လား………….။ ဘောင်ချာဖွင့်မရောင်းရတော့ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ရောင်းတာပဲ..။ ခုလိုရောင်းရတာ ပိုတောင်းကောင်းသေးသတဲ့..။ အကြွေးမကျန်ဘူးတဲ့လေ…။ အဲ 1 ဘောလုံး တော့ မပါသေးဘူး ….။ သူလည်း 8 လပိုင်း 15 ရက်နေ့ ပြန်စဖို့ တာစူနေပြီ..။ တစ်ခု လိုနေတာက တစ်ချို့ (အတော်များများ ပါ) ဝက်ဆိုဒ်တွေကို သာ ဘမ်းထားတာ…. သုံးလုံး ဂဏန်း ထွက်တဲ့ ဝက်ဆိုဒ်နဲ့ ဘောလုံးပွဲ ပေါကကြေးကြည့်တဲ့ ဝက်ဆိုဒ်နဲ့ ဂိုး အနိုင်အရှုံးကြည့်တဲ့ ဝက်ဆိုဒ်က အချိန်မရွေး ဖွင့်ကြည့်လို့ရနေတာပဲ…။ အဲသဟာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးကြီးပါပဲ…။
အေးပေါ့..ရိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကလည်း.. ကိုးရီးယာ.က အောင်မြင်ပီဆိုရင်..ကူးချမယ် ဆိုတာချည်းပဲလေ.. သူတို့တောင်သူများနားက ခိုးချထားတာပဲ.. သူများက ပြန်ခိုးတာ .. သိပ်တော့မဆန်းပါဘူး.. ဟဟဟဟ
ခူးကူးခွေကိုအားပေးတာလွန်ရာမကျပါဘူး ဘာလို့လဲဆို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်လိုက်ရင်
ဘာများအသိပညာပေးတာရှိလို့လဲ ဘာရသမှမပေးနိုင် ဘာဗဟုသုတမှမရှိတဲ့ဇာတ်ကားကိုထိုင်ကြည့်နေရမှာလား အချိန်ကုန် ငွေကုန် တာပဲအဖတ်တင်တယ်
တစ်ခါလာလဲ အချစ်ကား ဘာမှမထူးဘူး ်ဟာသကားကိုကြည့်တော့လဲပေါတောတောနဲ့ဘာမှရီစရာမပါဘူး
အဲတော့ ဘယ်သူလွန်ရာကျလဲ မြန်မာကားဆိုမကြည့်ဖြစ်တာနှစ်တော်တော်ချို့နေပြီ